Galinkii Danbe iyo Fikiradii Shacabwaynaha. - Cakaara News
Galinkii Danbe iyo Fikiradii Shacabwaynaha.
Jigjiga( Cakaaranews ) Isniin 22 Feb 2016 Kadib qudbadihii dhaxalgalka ahaa ee ay soo jeediyeen Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar, iyo wasiirka Arimaha Federalka Mudane kaasa Tagle Burhaanayaa galinkii danbe makarafoonada lagu wareejiyay dhanka shacabwaynaha si ay uga soo jeediyaan fikaradooda, ku aadan Hormarka Maamulka suuban iyo ladagaalanka argagixisada.
Hadaba waxay dhamaan shacabwaynaha deegaanka oo aan u kala ha dhin madasha kacadeeyeen kana marag kaceen in nabadgalyadii dhidibada loo aasay uu kuyimid hormarkan laxaadka leh iyo nidaamkan maamulka suuban ee ka gonaashaha leh, sidookale waxa uu shacabwaynuhu u mahadceliyay Hogaaminta XDSHSI, oo runtii kadanbeeyay isbadalkan taaba galka ah, waxayna ku buuriyeen xukuumada in nidaamkan hormarineed ay kasiiwadaan halkaas.
Dhanka kale waxay odayaashi, culimo awdiinkii haweenkii, dhalinyaridii,iyo waliba masuuiyiintii xilalka kaladuwan horay ugasooqabtay deegaanka ay balan qaadeen inay taageero buuxda lagarabtaaganyihiin XDSHS iyo Xisbiga EPRDF iyagoo waliba sheegay in siwayn ula dagaalamayaan aragagixsada,Controbaanka,fikirad cidhiidhyan iyo wax kasta oo caqabad ku ah hormarka iyo nabadgalyada Dalka iyo deegaankaba. Waxaa intaa dheer oo ay si adag u balan qaadeen in shacabwaynha deegaanku u kufoorarsan doona wax soosaarka dhulka si wadankeenu uga baxo faqriga ugana mid noqdo wadamada dhaqaalahooda dhaxdhaxaadka yahay
Ugudanbayna waxa uu shacabwaynuha ka codsaday xukuumada DDSI iyo federaalka in xooga lasaaro suuq u helida xoolaha deegaanka. Taasoo daawo kanoqonaysa kontrobaanka iyo ladagaalanka Argagixisda.